Faallo: Doorashada maanta maxay kaga duwantay tii dhacadey 2012 | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Faallo: Doorashada maanta maxay kaga duwantay tii dhacadey 2012
Faallo: Doorashada maanta maxay kaga duwantay tii dhacadey 2012
Maanta oo ah 08 02 2017 Magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya waxaa ka dhacaya doorashada madaxwaynaha Soomaaliya kaasi oo ay Ku tartamayan 21 musharax.
Doorashada waxaa soo dhamaaday wareega koowaad, wareega labad waxaa usoo gudbay Xasan Sheekh Maxmuud, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke.
Haddaba doorashadan maxay kaga duwan tahay doorashadii 2012 kii.
Hadii an Ku bilaabo Magaalada Muqdisho ayaa 2012 kii an lagu soo rogin Bondow ayadoo garoonka diyaaraha Aadan Cadde -na laguma soo rogin goob ka caagan diyaaradaha.
Doorashadan madaxwaynaha Soomaaliya ee hadda waxaa ay kaga duwan tahay tii 2012 kii, xiligaasi ma jirin isbahaysiyo siyaasadeed.
Hadda waxaa muuqata in ay jiraan labo kooxood oo kala ah is-badel doon iyo kuwo doonaya in lasoo ciliyo hogaankii waqtigiisu dhamaaday.
Aqoon-yahan Maxamed Caalim, oo ka mid ah aqoon-yanada Soomaaliyeed ee Ku nool dalka dibaddiisa oo waraysi gaar ah siiyay Xaqiiqa Times, ayaa waxaa uu sheegay in doorashadan wax badan ay kaga gedisan tahay tii hore.
“Doorashada madaxwaynaha Soomaaliya ee sanadkan waxaa ay Ku soo aaday xili Soomaaliya jiritaankeeda la isku haysto. Tusaale ahaan waxaa la isku haystaa badda Soomaaliya, waxaa la isku haystaa hawada Soomaaliya”, ayuu Caalim sheegay isagoo Ku sugan dalka Finland.
Doorashada waxaa ay sidoo kale kusoo aaday ayadoo maamul gobaleedyo ay ka her galeen Soomaaliya hase ahaatee uusan jirin maamul si buuxda u maamulada deeganada uu matalo, tusaale ahaan Jubaland, Koonfur galbeed Hirshabelle iyo iyo Puntland. Dhammaan maamuladan waxaa dhul wayn ka haysta al-Shabaab.
Doorashada ayaa timid ayadoo afarfii sano lasoo dhaafay wadanka ay ka dhaceen qaraxydii ugu badnaa, gaar ahaan weeraradii lagu qaaday hoteelada Magaalada Muqdisho oo uu ugu dambeeyay kii lagu qaaday hotel Dayax, oo lagu dilay in ka badan 15 qof Laguna dhawacay in ka badan 51 qof.
Sidoo kale afartii sano ee lasoo dhaaf ay waxaa LA dilay xildhibaanadii ugu badnaa, kuwaasi oo tiradoodu kor u dhaafay 18 mudane, halka la cambaareeyay diiwaanka xuquuqda aadanaha Soomaaliya iyo musuq-maasuqa dalka oo gaaray meeshii ugu xomaa.
Ayadoo musharixiinta madaxwaynaha Soomaaliya ay bixiyeen lacago badan waxaa ka sii daran kuraas lagu galay lacago waali ah oo lagu qiyaaso hal million oo dollar.
Ayadoo intaas ay jiraan ayaa haddana dalka waxaa uu Ku jiraa marxaladihii ugu xumaa sanadahii lasoo dhaafay.
Waxaa ka mid ah abaarta adag ee dalka ka jirta, ayadoo dadka qaarkood ay is-daldaleen markii ay xooluhu ka dhamaadeen.
Arinka aan falaqeynaynaa waa Madaxweynaha Doorashadan kuguu laystaa waxaa sugay sa jaqaweyn oo ay ugu Horayso sida caasimada soomaaliya loo siin lahaa Maqaam siyaasadeed oo soomaaliya oo dhan ka dhaxaysa iyadoo markasta tixgalinteeda ay leeyihiin Dadka degaan ahaa ka soojeeda. Waxaa kaloo madaxweynaha cusub sugeysa in la dhiso ciidan soomaaliyeed oo marka ugu horaysa Gacanta ku dhiga amaanka kudaha Arinka sadexaad ee Madaxweynaha cusub sugaysa ayaa ah in xildhibaanada la siiyo Guryo adegaan iyaga iyo xaasas kooda Hawsha sugeysaa way baden tahay ee in taan soo sheegay waa arimaha ugu horeeya ee laga Rabo inuu wax ka qabto sanadka 2017.
Hadii aanuu iman madaxweyne cusub oo madaxweyne hore xasan sheekh uu guulaysto markale xaalada soomaaliya waxay dib ugu Noqo waqtigii hogaamiya kooxeedka kaas oo aan ula jeedo Maamul Goboleed yada ayaa Noqon Hogaamiye kooxeed.
Qore maxamed caalim iyo Maxamed Dhaysane
Previous article3 musharax oo isku soo haray doorashada Madaxwaynaha
Next articleFarmajo oo loo doortay madaxwaynaha Soomalia